Ibhetri yeMagSafe ye-iPhone 12 ngoku iyathengiswa | Ndisuka mac
Ibhetri yeMagSafe ye-iPhone 12 ngoku iyathengiswa
I-Apple izakwazisa IMagSafe ibiza ibhetri nge-iPhone 12, i-iPhone 12 Pro, i-iPhone 12 encinci kunye ne-iPhone 12 Pro Max. Inkampani yaseCupertino ihlawulisa ukuba ibango belilindele oku kuluncedo kwi-iPhone 12 yabo.
Ngaphambi kokuqhubeka kufuneka sitsho ukuba le bhetri ihlangabezana ngokupheleleyo nokulindelweyo ngabasebenzisi kunye Ixabiso lomgangatho wexabiso libonakala lilungelelene. Njengamaxesha onke okanye kanye njengokuba iApple isenza mva nje, isixhobo asiyongezi iplagi ukutshaja ibhetri (yemicimbi yendalo esingqongileyo njengoko ichaziwe yinkampani) into ekufuneka ithathelwe ingqalelo xa uyithenga.
Ibhetri yeMagSafe ayinanto. Uyilo lwayo olumbeneyo nolunomdla likuvumela ukuba ubize isixhobo sakho naphi na. Kwaye iimagnethi ezilungelelaniswe kakuhle zigcina ziqhotyoshelwe kwi-iPhone 12 yakho okanye kwi-iPhone 12 Pro ukuze ukutshaja kungaphazanyiswa.
Ibhetri yeMagSafe inokutshajiswa ngokukhawuleza okukhulu xa idityaniswe ne-27W okanye itshaja ephezulu, njengaleyo ifakiwe neMacBook. Kwaye ukuba ufuna itshaja engenazingcingo, vele ufakele intambo yombane kwaye uya kuthi ga kwi-15W yokutshaja ngaphandle kwamacingo.
Ke ibango labasebenzisi abaninzi lokuba ibhetri ehambelana neMagSafe sele isemthethweni. Ixabiso lebhetri yi- € 109 kunye nabasebenzisi abafuna Thenga le nto intsha yeMagSafe ngoku Bazakuba belungele ukuthunyelwa kunye namaxesha okuhambisa ukuphela kwenyanga, phakathi kukaJulayi 23 ukuya ku-27. Le mihla inokwahluka ngokwemfuno zabasebenzisi ke kunokwenzeka ukuba inyuke ngokuhamba kwexesha ukuba abasebenzisi abaninzi bafuna ukuyifumana.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » Ibhetri yeMagSafe ye-iPhone 12 ngoku iyathengiswa
Uyibukela njani iMidlalo yeOlimpiki yaseTokyo 2020 ihlala simahla
I-RC macOS 11.5, i-watchOS 7.6 kunye ne-tvOS 14.7 iinguqulelo ze-beta ngoku ezifumanekayo kubaphuhlisi